Pea peptide chinhu chinoshingairira chidiki mamorekuru peptidi, inobviswa kubva mupea mapuroteni ne bio-yakaoma enzyme kugaya. Pea peptidi ine zvisere marudzi emaamino acids ayo anobatsira kuvanhu. Pea zvigadzirwa zvinogona kusangana newemunhu amino acids chikumbiro chekuvaka neDFA.
Raw Zvinyorwa: Icho chinhu che collagen chakatorwa mumabhonzo emombe. Mushure mekudziya-kupisa uye kudzikisira, ma enzymes anosanganiswa neepamberi yepamusoro-frequency yekubatsira tekinoroji kupatsanura mapuroteni epamusoro kubva pamapfupa emombe.
Maitiro: Mushure mekurairwa enzyme kugaya, decolorization, deodorization, kusimbisa, kuomesa, kugadzira zvigadzirwa zvine yakakwira peptide zvemukati.
Mamiriro: Yunifomu poda, zvishoma yero yeruvara, yakajeka kuravira, yakanyungudika zvachose mumvura isina kunaya kana marara.